Kucanasa izinkawu emawodini eRK Khan - Worldnews.com
ZIHLELI lubhojozi iziguli zasesibhedlela eRK Khan eChatsworth eThekwini, ezikhala ngezinkawu okuthiwa ziyacanasa emawodini.
Kuthiwa ezinye iziguli sezilala zingadlile ngoba ukudla eziphathelwa kona kudliwa yizinkawu. UNksz Zee Sithole, unina obelele kulesi sibhedlela, uthe imethusile into ayibonile izinkawu zisobozela
"NgoMgqibelo odlule ngavakashela umama ngamphathela nokudla. Ngamangala ngifika ewodini izinkawu zicanasa enye ivula nesikhwama sesinye isiguli. Yathatha inkomishi enamasi yawaphuza yalahla phansi. Isinkwa ebengisiphathele umama yasidla yasiqeda, yachitha netiye lakhe,"
Kushubile uGordhan evala ikhefu kwabakwa-Eskom
UNGQONGQOSHE wamaBhizinisi kaHulumeni, uMnuz Pravin Gordhan uveze ukuthi asikho isikhulu sakwa-Eskom esizothatha ikhefu uma zingakaxazululwa izinkinga zokucinywa kukagesi kule nkampani. Uthe le nkampani ibisebenzisa uR1 billion ngenyanga ukuthenga udizili ukuze kukhanye ezweni, okuyinto ezoncishiswa. Izolo uGordhan uthe bonke abasebenzi abawu-40 000 nezikhulu zakwa-Eskom...
Usesibhedlela \_'oshiswe\_' yiphoyisa
ILALISWE esibhedlela indoda yaseMatikwe, eNanda, okuthiwa ibhunyelwe yiphoyisa ngophethroli layishisa ngaphambi kokuthi lishise nendlu yakubo entathakusa yangeSonto. Umndeni kaMnuz Wonder Zwane (28) uthe akakwazi ngisho ukuziyela ethoyilethi ngenxa yokushiswa yiphoyisa ebelimsola ngokweba imali yentombi yalo. Unina kaZwane, uNksz Gugu Zwane, uthe iphoyisa elisolwayo lijwayele...
Ulaka lwe-IFP ihlulwa kolokuchibiyela
IHLULWE yavukwa wulaka I-IFP okhethweni lokuchibiyela obeluseNdumeni ku-ward 3 KwaZulu-Natal njengoba isimangale kwiKhomishini ezimele yokhetho ukuze luqalwe phansi. Abaholi be-IFP bagasele emahhovisi eKhomishini ebhekele ukhetho eDundee beyokhononda ngokuhlulwa kwabo ngoba bethi amavoti abekhona abengaphezulu kwesibalo sabantu abebebhalisele ukuvota ngezibalo ezingu-17....
Response to the Oncology Crisis in KZN
BY MRS NJ NKWANYANA MPL, KZN LEGISLATURE 2018 Somlomo, Sicela uMhlonishwa uDinangwe ake ame ngosicululela uNoyana ngezinkinga ezimayelana nosimo sokuxazulula inkinga ekhungethe ukwelashwa kweziguli eziphila nimdlavuza. Sikhathele ukuthi uMhlonishwa uDinangwe asitshele ngamaphupho asifuni ukumila izimpondo emakhanda emini kwabha. Incane inqukebekela phambili eyenziwe umnyango...
I-DA ifuna kuxoshwe ongqongqoshe
UMHOLI weDA, uMnuz Mmusi Maimane, uthe basaqhubeka nomkhankaso wabo wokuthi kuxoshwe uNgqongqoshe woMnyango wezaseKhaya uMnuz Malusi Gigaba nowoMnyango wabesiFazane uNksz Bathabile Dlamini ngoba abathembekile. UMaimane uthe emuva kokubhalela uMengameli Cyril Ramaphosa bemcela ukuthi axoshe labo ngqongqoshe kodwa wangabaxosha banqume ukuya enkantolo ukuze kube wumthetho onquma...
\_'Ubulale\_' abozalo ebanuka ngokuthakatha
UBOSHWE ekubo owesilisa waseMbangweni eMsinga osolwa ngokudubula amalungu amathathu omndeni wakhe ewasola ngokuthakatha unina owashona ngemuva kokugula. Owesilisa, iminyaka yakhe engatholakalanga uboshwe izolo ekubo. Kuthiwa uboshwe ephethe isibhamu okusolwa ukuthi sisetshenziswe kubulawa uNkk Thengeziphi Langa (45) noninazala uNkk Sho Langa (71). Kulesi sigameko esenzeke izolo...